Mirga hiree ofii ofiin murteeffannaa jechuun maal jechuudha? - Independent Oromia
Obbo Abiraahim Abbayyee
Mirga hiree ofii ofiin murteeffannaa
Heerri Mootummoota Gamtoomanii waa'ee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu maal jedha?
Hiree murteeffannaa isa kamtu Oromoof furmaata waaraa fida?
Maalummaa mirga ofii ofiin murteeffannaa; hiikota mirga hiree ofii ofiin murteeffannaan qabu; kaayyoon Qabsoo Bilisummaa Oromoo inni ganama qabsoon ittiin eegalame maal akka ta'e; galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa akka ta'e; Oromoo fi Impaayera Itoophiyaa gudduu hariiroon akkamii akka jiru;... Qabxiilee jajjaboo danuu kaasuun marii Obbo Abiraahim Abbayyee – Qabsaa’aa Oromoo gameessa – waliin taasifame.